Posted by တန်ခူး at 10:43 AM
တန်ခူးရေ…. ဂေးတွေမှာလည်း ဂေးအခွင့်အရေးရှိတယ်နော်….. အရည်အချင်းရှိပါလျက် ဂေး မို့ အလုပ်မခန့်ရင် တချို့နိုင်ငံတွေမှာ တရားစွဲလို့ ရသတဲ့။ စင်္ကာပူမှာတော့ မပြောတတ်ဘူး။
ဟုတ်ပါ့ ...ကိုပေါ ပြောသလိုပဲ ...အခုပို့(စ်)ကို ထိုင်းက အောင်မျိုးမင်း မသိစေနဲ့ ပြဿနာရှိတယ်...ဟီး....ဟီး
တန်ခူးရေ…. ခုနက ကွန်မင့်မှာ ကျန်ခဲ့လို့။ တချို့နိုင်ငံတွေမှာ အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်း ခွဲခြားမလုပ်ခန့်ခြင်း မရှိရဘူးတဲ့။ ကြားဖူးတာပြောတာပါ။ စင်္ကာပူမှာကတော့ အသက် ၄၀ ကျော်သွားတာနဲ့ အလုပ်ခန့်ရာမှာ Age discrimination ခေါ်တဲ့ ခွဲခြားကန့်သတ်ခြင်း ခံရလေ့ရှိပါသတဲ့။
တကယ်ရီရတယ် မတန်ခူး။ လုပ်သက်အတွေ့အကြုံကိုပဲ ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ ရွေးရမှာပေါ့လေ..:)
အလွဲတွေ ထဲမှာတော့ အလွဲကောင်းပါပဲ ၊၊
ဟိဟိ အဲ့လိုကြီးလား ကမ္ဘာကြီးက ကျဉ်းမြောင်းလာတာလား ကျယ်ပြောသွားတာလား စဉ်းစားလို့ တောင်မတက် တော့ဘူးး
မတန်ခူးရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ရီရတယ်.. အမ CV မှာ ဓာတ်ပုံထည့်စရာ မလိုဘူးလားဟင်။ ဒီမှာတော့ အဲဒီလို confidential တွေ ရှိလား မရှိဘူးလားတောင် မသိဘူးရယ်...
in US can't put photo also.. to protect giving preference due to the look than the skills..
သဘောတကျ ဖတ်သွားပါတယ် တန်ခူးရေ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို confidential တွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာကလည်း တနည်းတွေးရရင် အရည်အချင်းထက် age, gender ကန်.သတ်ချက်တွေ များနေလို့နဲ့ တူပါရဲ့နော်။
You cannot discriminate against gender, age, race, sexual in the USA.They even hire disable person.
You cannot discriminate against gender, age, race, sexual orientation in the USA.They hire disable person too.
စကေးပဲ လိုချင်ရင် လူကို ရုံးမတက်ခိုင်းနဲ့ပေါ့..။
လာတဲ့သူတွေကို လိုချင်တဲ့အရည်အချင်းရှိပါရက်နဲ့ မခန့် တာဆိုတော့...
သူတို့ တစ်ကယ်လိုတာက ဘာလဲဗျ...ဟဲဟဲ။
Equal Employment Opportunity Program ဆိုတာ ဒါကို ပြောတာ ထင်ပါရဲ့။ :P
အဟဲ... တန်ခူးရဲ့ အတွေးကို သဘောကျသကွယ်...။